Tele RELAY တစ်ခု - HBO လိင်ဒရာမာဖြတ်ကျော်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများနှင့်မိန်းကလေးအကြားဆက်ဆံရေးစတင်
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ "HBO ရဲ့လိင်ဒရာမာဖြတ်ကျော်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများနှင့်မိန်းကလေးအကြားဆက်ဆံရေးစတင်
Tele RELAY တစ်ခု9ဇူလိုင်လ 2019
HBO ရဲ့ Euphoria ပီတိ ပြပေါ်ချွတ်ရရှိသွားတဲ့ဖြစ်ကောင်းအဆိုးဆုံးလစ်ဘရယ်ဖျော်ဖြေရေးကန့်ဖြစ်စေ, ကမ်းလှမ်းရန်ရှိထားသည် ပြဌာန်းချက်မုဒိမ်းကျင့်, လမ်း သိပ်အများကြီး penisesရွှေဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်လာခြင်း cam မိန်းကလေးငယ်များ။ အဆိုပါဇူလိုင်လ7ဒါကလမ်းကြောင်းသစ်ပြပွဲရဲ့လိင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာပိုမိုနက်ရှိုင်းကြည့်နှင့်အတူသူများသည်အရာနှင့်ပိုပြီး featuring ဇာတ်လမ်းတွဲဆက်ပြောသည်။
တွင် "တစျခု Pt ။ II ကိုလှုပ်" ငါတို့ Jules (Hunter Schafer), တစ်ဦးမိုတယ်များတွင်အရွယ်ရောက်လူကိုအတူဖျောပွအဓမ္မပြုကျင့်မှုမြင်ကွင်းနှင့်အတူမိတ်ဆက်ပထမဦးဆုံး trans ဆိုတဲ့ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးမီးမောင်းထိုးရ။ တကျိပ်တပါးသောအချိန်၌, Jules ဖက်ပြောင်းရှေ့တော်၌ psyche ရပ်ကွက်မှကျူးလွန်ခဲ့။ တောင်မှကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်, Jules ဖှယျရှိသညျပြီးမှသာ-တည်းခိုအဲဒီမှာပိုဆိုးတယ် qui စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများအပြားကိစ္စများမှသည်ခံစားခဲ့ရသည်။ Jules '' ပထမဆုံးခရီးစဉ်အပျေါမှာကျနော်တို့အော်ဟစ်, သူ့လိင်တံကိုထုတ်နေတဲ့လူနာနှင်တံကိုတွေ့မြင် "ငါ့ဒစ်ကိုသင် fuck ဆိုတဲ့ cunt စို့!" ထွန်းတောက်ဘက်တွင်, ဒီကျနော်တို့ဤဇာတ်လမ်းထဲမှာမြင်ရတဲ့သာလိင်တံဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် remarking ဝမ်းနည်းစွာတန်ဖိုးရှိ Is ပြီးနောက်-ယခုယခင်ဖြစ်စဉ်များအတွက်ကိုမြင်လျှင်များစွာ။
အဆိုပါပြပွဲသြစတေး Jules '' ခန္ဓာကိုယ် dysphoria အပေါ်မှတ်ချက်ပေးဝေးရှက်ပါဘူး။ လမ်း (Zendaya) ဖျောပွပု szene ပြောပြ "သူမဖွင့်သော်လည်း, သူမ၏ဦးနှောက်ကိုမုန်းသည်မဟုတ်။ သူမသည်သူမ၏ရင်ဘတ်, သူမ၏အစာအိမ်, သူမ၏ပေါင်စတေးလျ, သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘဲတိုင်းလက်ရုံသူမ၏ပခုံးနှင့်သူမ၏လက်မောင်းကိုမုန်း၏။ သူမရဲ့ဒူး ထောက်. အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရသည်။ သူမ၏ခြေဆစ်များနှင့်သူမ၏ကြီးမားသော, fuck ဆိုတဲ့, မိုက်မဲခွကေိုကျော်။ သင်သည်သင်၏ဦးနှောက်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမုန်းသောအခါ, ကြွင်းသောအရာပျော်မွေ့ရန်ခက်ခဲင်သောကြောင့်သူမသည်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုမကောင်းတဲ့ခဲ့သည်မဟုတ်သောကြောင့်, သူမ၏ဘဝကိုမုန်း၏။ "
ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံမုန်းတဲ့ Jules မှဦးဆောင်နေစဉ် psyche ရပ်ကွက်မှာသူ / သူမ၏လက်ကောက်အလျားလိုက်အပေါက်။ သူတို့ဟာ Jules '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုသိလျှင်မသိသောဖြစ်နေဆဲသော်လည်းဒီသတ်သေရန်ကြိုးပမ်းမှုကျန်ရစ်သူပြီးနောက် Jules နောက်ဆုံးတွင်သူမ၏မိဘများ၏သရုပ်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူအသက်တဆယ်မှာမိန်းကလေးတစ်ဦးသို့ပြောင်းလဲမှစတင်သည်။
ဤရွေ့ကားမြင်ကွင်းများဒီမှာမှားင်အရာအားလုံးကိုပြသ Euphoria ပီတိ။ ဒါဟာတောင်မှသားသမီးတို့အဘို့တငျ့တယျလြောကျပတျခွငျးအဘို့အဆိုရူပမရှိရင်သိသာတစ်နှစ်တိုးတက်သောဇာတ်ကြောင်းတွန်း။ Jules '' ဇာတ်လမ်းကိုလုံးဝ Call ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပိုင်းရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်အတူဖြစ်ရပ်မှန်များဆုံးကလေးများကို bypass လုပ် ကထဲကကြီးထွား လိင်ကလူတွေထဲမှာနှင့်ဆိုလိုသည်မှာသတ်သေနှုန်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေမပါဘူး အကူးအပြောင်းလျက်ရှိရ၏။ ကျနော်တို့သာသူမ၏အဘို့တောင်းပန်ပါတယ်ခံစားရနှင့်သူမ၏စိတ်ပျက်စရာအပြုအမူအတွက်လုပ်ကြဖို့ထင်ပါတယ်။ Jules စဉ်းစားအသက်အရွယ်တကျိပ်တပါးမှာသတ်သေဖို့ကြိုးစားခဲ့နှင့်ယခုဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်အရွယ်ရောက်ယောက်ျားနှင့်အတူလိင်ရှိပါတယ်, ငါအကူးအပြောင်းမှာအားလုံး Jules ကူညီပေးခဲ့ပုံကိုကြည့်ရှုရန်ပျက်ကွက်။ Plus အား, ထိုအချက်ကို Julius ကြိုတင်မျိုး၏ "ဤနည်းအားမွေးဖွား" အငြင်းအခုံ undercuts ဒါအတော်များများကိစ္စများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာဒါကရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, အခြားဆယ်ကျော်သက်တောင်မှကျား dysphoria မပါဘဲဆိုပိုကောင်းခဲပြုမူ။ တဆယ်ခြောက်နှစ်အရွယ် Kat (Barbie Ferreira), ချွတ်သူမ၏သစ်ကို cam မိန်းကလေးလူနေမှုပုံစံစတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့, အများပြည်သူပွဲတော်ပြင်ပမှာနေတဲ့အရွယ်ရောက်လူနှငျ့အတူလိင်ရှိထားသည်။ လမ်းရဲ့တဆယ်နှစ်အရွယ်ညီမ Gia (မုန်တိုင်း Reid) အပြည့်အဝသူစိမ်းတွေနဲ့မြင့်မားတဲ့ချွတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများရရှိသွားတဲ့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လမ်းသူတို့ဟာ Rue ရဲ့အိပ်ရာထဲမှာနမ်းအမျှ Jules နဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ဖို့ကြည့်သောအရာကိုရဲ့ start စတင်။
SpaceX Starship ၏ပွဲဦးထွက်ချဉ်းကပ်နေသည် - BGR
Hubble အပြည့်အဝပွင့်တစ်ဦးဝေးကွာသောနဂါးငွေ့တန်းမျှော်လင့်ပါတယ် - BGR